निर्भिक निर्णय गर्ने अफगान महिला न्यायाधीशहरु छुटेका तालिवानी कैदीको तारोमा « News24 : Premium News Channel
निर्भिक निर्णय गर्ने अफगान महिला न्यायाधीशहरु छुटेका तालिवानी कैदीको तारोमा
एजेन्सी । अफगानिस्तानमा तालिवानले शासन हातमा लिएपछि सजाय पाउने डरले २२० भन्दा बढी अफगानी महिला न्यायाधीशहरु लुकेर बसेका छन् ।
पूर्व महिला न्यायाधीशहरुले बीबीसीसँग अफगानिस्तानका धेरै गुप्तचर साइटहरुबाट कुरा गरेका छन्। सुरक्षाका कारण यी सबैको नाम परिवर्तन गरिएको छ।
मासुमाले एक न्यायाधीशको रूपमा आफ्नो क्यारियरको दौरान महिलाहरुविरुद्ध बलात्कार, हत्या र यातनाको लागि सयौं पुरुषहरुलाई सजाय दिएकी थिइन्।तर जब तालिवानले शहर कब्जा गरे र हजारौं दोषी अपराधीहरुलाई जेलबाट रिहा गरे, उनीहरुलाई ज्यान मार्ने धम्की आउन थाल्यो।
‘पाठ सन्देश, भ्वाईस नोटहरु अज्ञात नम्बरहरुबाट उनको फोनमा आउन थाल्यो। ‘यो मध्यरात थियो जब हामीले सुनेका थियौं कि तालिवानले सबै कैदीहरुलाई रिहा गरेको छ’ मासुमा भन्छिन्। ‘हामी तुरुन्तै भाग्यौं। हामीले हाम्रो घर र त्यहाँ सबै कुरा छोड्यौं।’ पछिल्ला २० वर्षहरुमा २७० महिलाहरुले अफगानिस्तानमा न्यायाधीशको रुपमा सेवा गरेका छन्। यी मध्ये धेरै देशको प्रसिद्ध र शक्तिशाली महिलाहरु थिए । जस्ले समग्र अफगानिस्तानमा परिचय स्थापित गरेका थिए ।
मासुमा भन्छिन् ‘कारबाट शहरमा यात्रा गर्दा, म एक बुर्का लगाएको थिएँ ताकि कसैले मलाई चिन्न सकेन। सौभाग्य हामी सबै तालिबान चौकीहरु पार गर्यो । ‘दोषीले न्यायाधीशलाई भने, ‘म बाहिर आएर बदला लिनेछु’।
मासुमा आफ्नो घरबाट बाहिर निस्केकी थिईन्, उनीहरुलाई उनका छिमेकीहरुले सन्देश पठाएका थिए र तालिवानका धेरै सदस्यहरु उनको घरमा आएका थिए। उनले भनिन्, ‘जति छिटो उनका छिमेकीहरुले ती मानिसहरुको विवरण सुनाए, उनी बुझ्छिन् कि उनीहरु कसलाई खोज्न आएका थिए।’
धेरै महिना पहिले जब तालिवानले देशको शक्तिमा थिएनन्, मासुमाले एउटा मुद्दामा निर्णय गरेकी थिइन् जसमा तालिबान सदस्यले आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरेका थिए । मासुमाले दोषीलाई २० वर्ष जेल सजाय सुनाएका थिए । उनी भन्छिन्, ‘म अझै पनि त्यो जवान महिलाको रूप सम्झन सक्छु। उनीमाथि एक भीषण अपराध भएको थियो । ’
मुद्दाको अन्त्यपछि, अपराधीले मलाई सम्पर्क गरी भन्यो कि जब उनी बाहिर आउछन्, उनी मसँग उस्तै व्यवहार गर्नेछन् जसरी उनी आफ्नी श्रीमतीसंग गरे । त्यसबेला मैले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको थिइनँ, तर तालिबान सत्तामा आएपछि उनीहरुले मलाई धेरै पटक फोन गरे र भने, उनीहरुले मसँग सम्बन्धित सबै जानकारी अदालत कार्यालयबाट लिएका थिए।,
‘उसले मलाई भन्यो, म तिमीलाई भेट्छु र ममाथि भएको निर्णयको बदला लिन्छु। बीबीसीको एक अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि कम्तीमा २२० पूर्व महिला न्यायाधीशहरु अफगानिस्तानमा लुकेका छन्। बिभिन्न प्रान्तहरुमा लुकेका जना पूर्व न्यायाधीशहरुसंग कुरा गर्दा उनीहरु सबैले लगभग उस्तै कुराहरु भने ।
सबैलाई तालिबानका सदस्यहरुले ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए र उनीहरुलाई नै जेल सजाय दिइएको थियो। यी मध्ये चार पुरुष थिए जो आफ्नी श्रीमती को हत्याको लागि जेल सजाय भोगेका थिए।
सबै पूर्व न्यायाधीशहरु कम्तीमा एक पटक ज्यान मार्ने धम्की पाए पछि आफ्नो संख्या परिवर्तन गरेका छन्। उनीहरु बिभिन्न ठाउँहरुमा लुकेका छन् र हरेक केहि दिनहरुमा आफ्नो स्थानहरुलाई परिवर्तन राख्न ।उनले यो पनि भने कि तालिबानका सदस्यहरु उनको अघिल्लो घरमा आउँछन्। उसको छिमेकी र साथीहरु उसको ठाँउ को बारेमा सोधिएको छ।
तालिवानले के भने?
यी आरोपहरुको जवाफ दिँदै तालिवानका प्रवक्ता बिलाल करीमीले बीबीसीलाई भने, ूमहिला न्यायाधीशहरु अन्य महिलाहरु जस्तै निर्भय रहनु पर्छ। कसैले उनीहरुलाई धम्की दिनु हुदैन। हाम्रा विशेष सैन्य एकाइहरु यी उजुरीहरुको छानबिन गर्न चाहन्छन् र यदि कुनै उल्लंघन भयो भने हामी कारवाही गर्नेछौ । ’ यससँगै उनले तालिबानको पुरानो प्रतिज्ञा दोहोर्याए जसमा उसले अफगानिस्तानको अघिल्लो सरकारका सबै कर्मचारीहरुलाई आममाफी दिएको थियो। उनले भने, हाम्रो आममाफी बिल्कुल सत्य हो, तर यदि कोहि देश छोड्न चाहन्छन्, तब हामी उनीहरुलाई अनुरोध गर्दछौं कि उनीहरु त्यसो नगर्नुहोस् र आफ्नो देशमा नै बस्नुहोस् । ’
जब कैदीहरु जेल बाट रिहा भएका थिए, त्यहाँ तालिबान संग सम्बन्धित थिएनन् जो अपराधीहरु को एक ठूलो संख्या थियो। महिला न्यायाधीशहरुको सुरक्षाको सन्दर्भमा करीमीले भनिन्, लागू औषध तस्कर, माफिया सदस्यहरुको मामलामा हाम्रो इरादा स्पष्ट छ कि हामी उनीहरुलाई नष्ट गर्न चाहन्छौं। हामी उनीहरु बिरुद्ध कडा कारबाही गर्नेछौ । ’
यी उच्च शिक्षित महिलाहरु आफ्नो परिवार को एकमात्र कमाउने थिए। तर अब उनीहरुको तलब बन्द भएको छ र उनीहरुको बैंक खाताहरु सिल गरीएको छ। उनीहरु अब बाँच्नका लागि समेत आफ्नो परिवारको अगाडि हात फैलाउनु पर्छ।
तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि महिला न्यायाधीश सानाले महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनाहरुको अनुसन्धान गरिरहेकी थिइन्। उनले भने कि धेरै जसोमा उनले तालिबान र कट्टरपन्थी समूह आईएसआईएस का सदस्यहरुलाई सजाय दिए।
‘मलाई २० भन्दा बढी धम्की दिने फोन आएको छ। यी सबै पूर्व कैदी हुन् जो अब जेल बाहिर छन्।ूउनी अहिले आफ्नो परिवारका एक दर्जन भन्दा बढी सदस्यहरु संग एक गोप्य ठाउँ मा लुकेका छन्। एक पटक मात्र एक पुरुष सदस्य उनको अघिल्लो घरमा गएका थिए। तर जब उनी त्यहाँ लुगा बाँधिरहेका थिए, तब एक कमाण्डरको नेतृत्वमा धेरै तालिबान उनको घर पुगे।
महिला अधिकारको लागि लडाइ
दशकौंदेखि, अफगानिस्तान संसारको सबैभन्दा डरलाग्दो देशहरु मध्ये एक भएको छ। ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार यहाँ ८७ प्रतिशत महिला र केटीहरुलाई आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समयमा दुर्व्यवहारको सामना गर्नु परेको छ।
तर महिला न्यायाधीशहरुको यो समुदायले देशका पुराना कानूनहरुको समर्थन गर्ने काम गरेको थियो, जसको उद्देश्य महिलाहरुलाई समर्थन गर्ने थियो। यसले महिला र केटीहरु विरुद्धको हिंसा दण्डनीय आपराधिक कार्य हो भन्ने धारणालाई समर्थन गर्न मद्दत पु¥यायो।
बलात्कार, यातना, जबरजस्ती विवाह बाहेक, त्यहाँ त्यस्ता केसहरु पनि थिए जसमा महिलाहरुलाई सम्पत्ति राख्न वा काम वा स्कूल जानबाट रोकिने गरेको थियो।
यी सबै छ जना पूर्व न्यायाधीशहरु, जो देश को प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो, यो पनि उनीहरुलाई आफ्नो क्यारियरको दौरान उत्पीडनको सामना गर्नु परेको छ भने।
एक घरमा सुरक्षित रहेकी आस्माले भनिन्, ‘म मेरो देश को सेवा गर्न चाहन्छु, त्यसैले म एक न्यायाधीश बन्न चाहन्छु । ’
पारिवारिक मामिलाको अदालतमा, मैले धेरै जसो केसहरु देखेको छु जसमा महिलाहरु तालिबानका सदस्यहरुबाट सम्बन्ध विच्छेद वा अलग्गिने चाहन्छन । ’
हामीले हाम्रा एक प्रिय साथी र न्यायाधीश पनि गुमायौं। उनी कामबाट घर फर्कने क्रममा बेपत्ता भएकी थिइन्। उनको शव पछि भेटियो।ू
न्यायाधीशको हत्या प्रकरणमा कसैलाई पनि मुद्दा चलाइएको थिएन। त्यसबेला स्थानीय तालिबान नेताहरुले संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए।
के भविष्यमा महिला न्यायाधीश हुनेछन् ?
यो अझै थाहा छैन कि अफगानिस्तानको नयाँ नेतृत्वले महिला अधिकारहरुमा कति ध्यान दिनेछ, तर अहिले सम्म यो स्थिति गम्भीर रहेको देखिन्छ।
अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को घोषणामा कुनै महिलालाई स्थान दिइएको छैन, न त महिला मामिलामा कसैलाई नियुक्त गरिएको छ। एकै साथ, स्कूलहरुको सम्बन्धमा, शिक्षा मन्त्रालयले एक आदेश जारी गरेको छ कि पुरुष शिक्षकहरु र बच्चाहरु स्कूलमा फर्किन्छन्, जबकि महिला कर्मचारी र छात्राहरुलाई बोलाइएको छैन।
‘करीमीले तालिवानको तर्फबाट भनेकी छन् कि उनी महिला न्यायाधीशहरुको भविष्यमा कुनै भूमिका हुन्छ कि हुन्न भन्ने बारेमा टिप्पणी गर्दैनन्।
महिलाहरुको काम गर्ने अवस्था र अवसरहरुको बारेमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भनिन्।
अफगानिस्तानमा अहिलेसम्म १ लाख भन्दा धेरै मानिसहरुलाई देश निकाला गरिएको छ। सबै ६ महिला न्यायाधीशहरुले भनेका छन् कि उनीहरु अझै पनी देश छोड्नको लागि बाटो खोजिरहेछन् तर उनीहरुका सामुन्ने कठिनाई यो छ कि उनीहरुसंग पैसा छैन र परिवारका नजिकका सदस्यहरुको पासपोर्ट छैन।
महिला न्यायाधीशहरुको सुरक्षित निकासीको माग
अफगानिस्तानकी पूर्व न्यायाधीश मारजिया बाबाकरखेल, जो हाल बेलायतमा बस्दै आएकी छिन्, सबै पूर्व महिला न्यायाधीशहरुलाई देशबाट सुरक्षित रुपमा हटाउन माग गरेकी छिन्।
उनले भने, ‘यो महत्वपूर्ण छ कि अफगानिस्तानको धेरै ग्रामीण प्रान्तहरुमा बस्ने मानिसहरुलाई भुल्नु हुँदैन, राजधानी काबुलबाट टाढा।
मेरो मुटु टुट्यो जब यी न्यायाधीशहरु मध्ये एक महिला न्यायाधीशले मेरो गाउँबाट फोन गरिन्। उनी भनिरहेकी थिइन ‘मर्जिया हामी के गर्ने ? हामी कहाँ जाने ? यो निश्चित छ हामी चाँडै हाम्रो चिहानमा हुनेछौं । काबुलमा मिडिया र इन्टरनेट अझै उपलब्ध छन्। यही कारणले न्यायाधीशहरुको आवाज सुनिन्छ, तर ग्रामीण प्रान्तहरुमा उनीहरुसंग केहि छैन। ‘
यि धेरै न्यायाधीशहरुसंग पासपोर्ट वा सही दस्तावेज छैन उनीहरुलाई देश छोड्न मद्दत गर्न। तर उनीहरुलाई बिर्सनु हुदैन। उनीहरु ठूलो खतरामा छन्।
न्यूजिल्याण्ड र बेलायतसहितका धेरै देशहरुले भनेका छन, ‘कि उनीहरुले सहयोग गर्ने छन्। तर यो मद्दत कसरी पुग्छ र कति जना न्यायाधीशहरु यसमा सामेल हुनेछन् स्पष्ट छैन।’